व्यङ्ग्य - गदगद नेपाल, खुशी र सुखी नेपाली ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
व्यङ्ग्य - गदगद नेपाल, खुशी र सुखी नेपाली !
पुस ११, २०७७ शनिबार १०:५०:५३ | मिलन तिमिल्सिना
चुनावमा भोट माग्ने बेला कम्युनिष्टहरुले भनेका थिए-पाँच वर्षमै देशले कोल्टे फेर्छ ।
नेपाल समृद्ध हुन्छ, नागरिक सुखी र खुशी हुन्छन् । तर उनीहरुले भने अनुसार हेर्न र भोग्न पाँच वर्ष पनि पर्खनु परेन । कम्युनिष्टको सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै देशले कोल्टे फेर्यो । सरकार र सरकार चलाउने पार्टीले कोल्टे फेर्यो । आमनागरिकको आशा र विश्वासले कोल्टे फेर्यो ।
अस्तिताकासम्म देश पहिले जस्तो थियो, उस्तै थियो । कहीँ कतै हलचल नभइ ठिङ्ग मात्रै । प्रतिनिधि सभा पनि ठिङ्ग । दुई जना पाइलट भएको पार्टी पनि ठिङ्ग । जे गर्न खोज्यो त्यही गर्न सक्ने बलियो सरकार पनि ठिङ्ग । मन्त्री पनि ठिङ्ग, सांसद पनि ठिङ्ग । सबै स्थिर । हलचल त के अलिअलि चलमल समेत गर्न सकेनन् । कोल्टे फेर्नै सकेनन् ।
तर एकाएक यी सबै ठाउँमा एकैपटक हलचल आयो । प्रतिनिधिसभा गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो । देश र नागरिकको लागि के के न गर्छौं भनेर दौरासुरुवाल लगाएर सरकारमा गएका मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर रातारात मन्त्री निवासबाट हिँडे । झण्डै दुई तिहाइको सरकारमा पहिरो गयो, सरकारले कोल्टे फेर्यो ।
अब हामी कहिल्यै झगडा गर्दैनौं भनेर अंकमाल गर्दै एक भएका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु जम्बो जेटबाट एकाएक भुईंमा पछारिए । दुई पाइलटले दुईतिर मोडेपछि जम्बो जेट टुक्राटुक्रा भयो । दुई पाइलटले हाँकेको जेटले पनि कोल्टे फेर्यो ।
बसिरहेको ठाउँले कोल्टे फेरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चिल्ला कार र आरामदायी कुर्सी छोडेर सडकमा झरे । चिसो भुईंमा पलेँटी कसेर बसे । छँदाखाँदाको पद र सुविधा छोडेर वरिष्ठहरु सडकमा पुगे । उनीहरुको आसनले कोल्टे फेर्यो ।
सबैतिर सबैले कोल्टे फेर्न पर्ने गरी बालुवाटार र खुमलटारलाई अलग अलग केन्द्रबिन्दु भएर निस्केको जालझेल र षडयन्त्रको धक्काले अहिले प्रदेश, पालिका र गाउँका वडा वडासम्म परकम्प ल्यायो । देशभरीकै मान्छे जर्याकजुरुक भए, जुर्मुराए । अर्थात पुरै देशले कोल्टे फेर्यो । देशले कोल्टे फेर्न पाँच वर्ष त के, तीन वर्ष पनि लागेन । भोट माग्ने बेलामा कम्युनिष्टहरुले जे भनेका थिए, त्यही भयो । देशले कोल्टे फेरेसँगै नेपाल र नेपालीको अवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन आयो । सुखी, खुशी, अनि समृद्ध नेपाल र नेपालीको नारा यथार्थमा परिणत भयो ।
अस्तिताकासम्म कोरोनाको चिन्ता थियो । खोप कसरी आउला भन्ने पिर थियो । कोरोना सर्ला कि भन्ने डर थियो । गास, बास र कपास कसरी जुटाउने भन्ने अलमल थियो । छटपटी र निराशा थियो । सबैका अनुहारबाट हाँसो हराएको थियो । हाँस्न गाईजात्राको दिनसम्मै पर्खनुपर्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता थियो । तर हाँस्न गाईजात्रा पर्खनै परेन । पुसमै गाईजात्रा हेरेर हाँस्न पाइयो । बालुवाटारमा गाईजात्रा, खुमलटारमा गाईजात्रा, माइतीघरमा गाईजात्रा । दिनदिनै घोचपेच र दाउपेचको रमाइलो प्रहसन !
डाक्टरहरु भन्छन्, हाँस्ने मान्छे स्वस्थ हुन्छ । अरु तरिकाले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन नसके पनि सरकार र नेताहरुले हँसाएरै भए पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई सबल राख्न जोड दिएका छन् । राजनीति नतातेको भए पुसमा योभन्दा बढी जाडो हुन्थ्यो । जाडोमा झन् कोरोनाको डर हुन्थ्यो । तर एकाएक राजनीति तात्यो, जाडो हरायो । हाँसोसँगै मन तातो भयो । नेताहरुको दौडधूप बाक्लिएपछि र राजनीति तातिएपछि कोरोना पनि बेपत्ता भयो ।
यति मात्र होइन अब धमाधम रोजगारी पनि खुलेको छ । गफको मेलो मिलेको छ । कम्युनिष्ट एकता, चुनाव, संसद पुनस्र्थापना, सूर्य चुनाव चिन्ह, निर्वाचन आयोग, अदालत, माइतीघरको पलेँटी, ओली, प्रचण्ड, नेपाल, वामदेव, बादल, देउवा कसको मात्रै कुरा गरेर भ्याउनु ? दिनरात कुरा गरेर पनि नसकिने कुरा मिलेको छ । अब मान्छेलाई दिन कटाउन सास्ती भएन । के काम गर्ने भनेर झोक्राउन पनि परेन । कुरा गर्ने कुरा पाइयो । हाँस्न पाइने मसला मिल्यो । हाँस्नु र कुरै गरेर दिन कटाउन पाउनु भनेको सुखी र खुशी हुनु हो ।
अहिले गफ गर्ने काम पाइएको छ ।
अलि पछि चुनाव हुने छाँट आउन थाल्यो भने म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्छ । हरेक दलका झण्डा बोक्ने र नारा भट्याउने काम पनि पाइन्छ । सित्तैमा खाजा र मासुभात खान पाइन्छ । काम भने काम, माम भने माम । कोरोनाले रुनु न हाँस्नु भएका नागरिकका लागि योभन्दा ठूलो अवसर के हुन सक्छ !
नेपाली मात्र होइन, नेपाल झन् बढी खुशी छन्, झन् धेरै दंग छन् । नपत्याए माधव नेपाललाई हेर्नुहोस् । पहिले दुई दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले महाधिवेशनमा हारेर पनि पार्टी अध्यक्ष हुन पाए । यसबीचमा ओलीले कहिल्यै अघि बढ्न दिएनन् । पेलेको पेल्यै गरे । पहिले एमालेमा छँदा पार्टी अध्यक्षमा हराए । पछि पार्टी एकता हुँदा झण्डै वरिष्ठबाट पनि मिल्काएका थिए ।
अध्यक्ष हुन पाउने त कहिले कहिले ? अहिले ओलीले देश र पार्टीलाई कोल्टे फेरिदिएपछि नेपालको भाग्य चम्कियो । गुमेको र ठेगान नभएको अध्यक्ष पद मिल्यो । त्यसैले नेपाल झन् धेरै खुशी र दंग छन् । नेपाल खुशी हुनु भनेको नेपाली खुशी हुनु हो, नेपाल समृद्ध हुनु हो ।
यसबीचमा रेल र तेल नआएर के भयो त ? अनेक खेल, जालझेल, बेमेल र संसद र पार्टी नै बगाउने भेल आयो । पानीजहाज नआएर के भयो ? पानीजहाज कार्यालय आयो । हुँदाहुँदै एकैपटक चुनाव आयो । हेर्दाहेर्दै चुनावी घोषणापत्र, नारा, भाषण, आश्वासन सुनेर त्यसैत्यसै गदगद हुन पाइने दिन पो आयो !
अन्तिम अपडेट: माघ १९, २०७७
‘अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकासका काम रोक्न हुँदैन’
दुई लाख ४६ हजार भारुसहित विराटनगरबाट भारतीय नागरिक पक्राउ
श्रम बजारमा बिक्ने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाैडेल
इङ्गल्याण्डसँगकाे तेस्राे टेस्ट भारतले १० विकेटले जित्याे
नेकपा आधिकारिताकाे निर्णय फागुन २० मा
'प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेको हो' भनेर सर्वाेच्चले प्रमाणित ग...
संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिन्...
ग्वार्को तरकारी बजारमा 'क्यूआर' कोड सेवा सुरु
‘नेकपा फुटेकै छैन, कांग्रेसले के आधारमा सरकार गठनको कुरा ग...
वैदेशिक राेजगारीकाे प्रलाेभनमा टर्की पुर्‍याएर मानव बेचबिखन ...
महोत्तरीको गौशालामा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा ताला
गैँडा मारेर खाग तस्करी गरेकाे आराेपमा काठमाण्डौबाट तीन जना ...
'प्रेस्क्रिप्शन' अनुसार औषधि बेच्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु...
शेफ सन्ताेष साह भन्नुहुन्छ, ‘अब नेपालको खानाको गुणस्तर बढ्छ, य...
त्रिभुवन विमानस्थल अब १८ घण्टा मात्रै खुल्ने, ‘चार वटा उडानका लागि मात्रै रातभर कुर्न सक्दैनाैँ’
तत्काल सचिवालय बैठक डाक्न वामदेव गौतमको माग
'प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु हुँदैन'